Farmaajo oo u duulay Addis Ababa kana qayb galaya shirka IGAD - Halbeeg News
Farmaajo oo u duulay Addis Ababa kana qayb galaya shirka IGAD
MUQDISHO (HALBEEG) – Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saaka ka duulay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyaga oo ku wajahan magaalo madaxda dalka Ethiopia ee Addis Ababa.
Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb geli doona kulan aan caadi ahayn oo maanta magaalada Addis Ababa uga furmaya madaxda dalalka xubnaha ka ah Urur Goboleedka IGAD.
Kulanka madaxda IGAD oo uu ka horreyn doono kulan kale oo ay wada qaadan doonaan wasiirrada arrimaha dibadda ee IGAD, waxaa ajandeyaasha diiradda lagu saari doono ugu muhiimsan sidii loo dardar gelin lahaa loolana jaanqaadi lahaa isbedellada siyaasadeed ee bilihii u dambeeyey ka dhacayey gobolka.
Madaxda IGAD ayaa sidoo kale ka wada xaajoon doona dardar gelinta dadaallada nabadeed ee lagu dhex dhexaadinayo dalalka Jabuuti iyo Eritrea, iyadoo Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu muddo toban sano ka badan markii ugu horreysey ka qayb geli doono shirka IGAD.
Waar markii saddexaad ee Madaxweynaha Soomaaliya Maxamad Cabadullaahi Farmaajo tan iyo markii lasoo doortay sannadkii 2017 uu ka qayb galo shir madaxeedka Urur Goboleedka IGAD.
Madaxda IGAD oo Addis Ababa maanta shir uga furmayo
NISA oo hawlgal ka fulisay Mubaarak, sarkaal Al shabaab ahaa oo la dilay